Hillary Clinton oo si rasmi ah u aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hillary Clinton oo si rasmi ah u aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga
Hillary Clinton ayaa si rasmi ah habeenkii xalay u aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimo ee dalka Maraykanka ka dhici doonta bisha November ee sanadkaan 2016-ka.
Waxay Mrs Hillary Clinton tilmaantay in dalka Mareykanka uu yahay dal haatan lagu xisaabtamo, iyadoo ku baaqeysa in la midoobo, waxayna hadaladeeda ku durtay ninka ay is hayaan ee musharaxa xisbiga jamhuuriga, Donald Trump.
Mrs Cilinton ayaa sidoo kale sheegtay in dalka Mareykanka oo si wadajir ah u shaqeeya ay mustaqbal wanaagsan u noqon karto qofkasto, waxayna u mahad-celisay taageerayaasheeda iyo kuwii musharixii ay ku tartameen doorashada hoose ee dimuquraadiga, Bernie Sanders.
Mrs Hillary Clinton ayaa noqonaysa haweentii ugu horeeysay ee u tartanta xilka madaxwayninimada ee dalka Mareykanka, waxayna noqonaysaa hadii ay doorashada ku guuleysto mid taariiqda gasha.
Dhinaca kale, madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka Maraykanka Barack Obama ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay inay doortaan Hillary Cilinton, isagoo Hillary ku tilmaamay inay tahay shaqsi mudan islamarkaana xilka madaxtinimada ee dalka Maraykanka kasoo bixi karta.